164 Qalabka Cawaaqibka Iskudhufka AC Iibka - Dukaamaysiga Dukaamada Internetka
FMW qalabka wax soo saarka sidaas darteed waa la qorsheeyay in ay si cad u cidhib tiraan saddexda is-qabadsiinta ee ku saabsan dalxiiska xoogga leh oo ay yihiin si fiican loogu talagalay bixinta dhib la'aan bilaash ah oo aan qadar ahayn. The koronto-dhaliye la'aan waxaa loogu talagalay ka fogow dareerayaasha xad dhaafka ah marka la barbardhigo caanaha. A si buuxda daadadku xiran yahay waxay hoos u dhigtaa saliingaha marka la barbardhigo. Taabashadani oo leh qashinka iyo si taxadar leh loo doorto qashinka iyo naqshadaha ilkaha ayaa hubiya in aad u hooseeyso duufaan Qodobbada ugu muhiimsan waxay awood u siiyaan awoodda Voltage Nidaamka Regulator (AVR) oo ku yaala qulqul-xajiyaha oo leh nidaam xakameyn xakameyn ah. Natiijadan korantada ah ee rotor-ka ayaa lagu quudinayaa rotor ugu weyn iyada oo loo marayo seddex waji buuxa dhejinta buundada macaamilka, kaas oo lagu ilaalinayo xakameyn xooggan oo ka soo horjeeda kororka sababay gaaban gaaban. Nidaamka rinjiga ama heerkulka kor u kaca beddeluhu waa Class H.
1. Generator Alternator Farsamada Farsamada (4.3kw ilaa 16kw)
2. Qiimaynta iyo Shahaadada
3. Adva dhajinta Alternator Alternator-ka
● Heerka 2/3 qaylo-dhaan siinta tarjumaha.
● Nadaamka niyadjabsan ee nadiifka ah.
● Qalabka fasalka H waxaa ku jira qalab khaas ah iyo qalabka armofiyanka oo leh qalab tiknoolajiyo dheeri ah iyo qalab. 180 ℃ kuleylka kuleylka.
● Naqshadaynta gaarka ah waxay si wax ku ool ah uga fogaan kartaa mawjada seddexaad (3aad, 9aad, 15aad) ee korantada sidaa daraadeed waa naqshadeynta ugu fiican ee UPS ee gawaarida aan qadka lahayn.
● Naqshad tayo sare leh ee AVR waxay hubisaa faragelinta hoose ee raadiyaha ee gudbinta.
● Ilaalinta heerka IP23 waxay ka hortagi kartaa in la burburiyo dhibcaha biyaha.
● Si fiican u shaqaynaya ka yar 95% qoyaan qaraabo ah laakiin bay'ad nadiif ah.
● Ku rakibidda iyo dayactirka fudud.
② Tijaabin Kartid:
● 10 % in kabadan 1 saac shaqo iyo 100 % xayiraad shaqo joogto ah
● Qalabka bedelka: 100 % silig naxaas ah, dhammaan fiilada qabow-qaboojiyaha, H-macmacaan
● Heerka Gawaarida Dhex-dhexaad la'aanta ah (= 95-105)% Un
● Heerka xakamaynta awoodda joogtada ah ee gobolka _ ± 1.0 %
● Heerka qawaaniinta xad-gudubka-Xadka Gobolka + 20 % / -15%
● Soo kabashada Voltage t ime≤1.0S
● Heerka isbeddelka isbeddelka ± 0.5 %
● Heerka qiyaasta xad-dhaafka ah ee Gobolka ≤ ± 5 %
● Heerka xakamaynta xadadka joogtada ah ee gobolka - ≤ 10 %
● Saamaynta isbeddelka joogtada ah0.5 %
● Heerka kulaylka / Heat-State voltage2 %
● Isku-ilaalinta adkaysiga baaritaanka sida waafaqsan GB5226.1-2002-19.3
● Ikhtiyaari-Voltage ayaa tijaabiyey sida ugu habboon GB755-2000-8.1 (oo leh 1500V ilaa 60S)
● Dhammaan qaybaha korontada lagu baaro sida waafaqsan GB5226.1-2002-19.6
● Nabadgelyada farsameynta baaritaanka sida waafaqsan GB / T820.8-2002-6.3
● Heer-dabka / Dab-demiska ayaa lagu baaray sida waafaqsan GB / T2820.8-2002-6.4 / 6.5
● Heerarka wax soo saarka guud: GB755, QAYBTA QAYBTA BS 5000, VDE 0530, NEMA
Xiga : 184 taxane cillad la’aan ah synchronous ac alternator
Mawduuca : 164 Qalabka Cawaaqibka Iskudhufka AC